Navelan'ny Parlemantera Venezoela Vaovao hiala ny hatsiaka ny filohan'ny mpanohitra Guaido
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovaon'ny dia momba an'i Venezoela » Navelan'ny Parlemantera Venezoela Vaovao hiala ny hatsiaka ny filohan'ny mpanohitra Guaido
Maduro sy Guaido dia miady ho filoham-pirenena ao amin'ny parlemanta vaovaon'i Vezuela
Ny parlemanta vaovao dia mianiana anio anio talata 5 janoary 2021 ao Venezoela. Nandritra izay roa taona lasa izay, Juan Guaido sy ny filoha Nicolas Maduro dia niady ho an'ny zony hitaky ny maha filoha ny firenena.
Tamin'ny 23 Janoary 2019, nanambara ny tenany ho filohan'ny tetezamita i Guaido. Ity dingana feno fahasahiana ity dia nanamarika ny fiovan'ny krizy politika tany Venezoelà resin'ny resa-be ka nahatonga ny fanoherana an'i Maduro satria nitombo manodidina ny 80 isan-jato ny lazan'i Guaido. Tsy nety nanaiky anefa i Maduro, ary mbola mitohy hatrany ny fijanonana mandraka androany.
Maduro dia nofaritana ho mpanao didy jadona izay iharan'ny sazy tandrefana raha i Guaido kosa dia nekena ho mpitondra ara-dalàna an'i Venezoela avy amin'ny firenena 50 eran'izao tontolo izao, anisan'izany i Etazonia, hatramin'ny fotoana nidiran'i Trump.
Nanambara ampahibemaso i Trump fa tsy natoky an'i Guaido loatra izy, na dia nanangona hery lehibe hanohanana an'i Guaido aza ny fitantananany manokana, anisan'izany ny filoha lefitra Pence sy ny sekreteram-panjakana Pompeo. Na izany aza, neken'ny Etazonia i Guaido fotoana fohy taorian'ny nandraisany ny maha filoham-pirenena vonjimaika azy.
Tamin'ny seza 277 tao amin'ny parlemanta, nandresy 256 ireo mpiara-dia amin'i Maduro taorian'ny fifidianana solombavambahoaka tamin'ny volana lasa teo izay ankivy ny antoko mpanohitra lehibe notarihin'i Guaido. Maduro mitazona ny fanohanan'ny tafika matanjaka ao Venezoela sy ny rafi-panjakana rehetra izay afaka nampiasa fahefana tena izy. Ny Antenimieram-pirenena irery no tsy azony, mandraka ankehitriny.
Mahomby anio, tsy hitana ny toeran'ny mpikabary ao amin'ny Antenimieram-pirenena intsony i Guaido, satria ny volana lasa teo dia nandany ny didim-panjakana iray ny parlemantera izay namela ny tenany hiasa hatrany amin'ny efitrano malalaky ny maro an'isa Maduro mandra-pahatongan'ny fifidianana vaovao amin'ny 2021.
Androany maraina talohan'ny fianianana natao, dia tonga tao amin'ny tranon'ny Antenimieram-pirenena ny mpanao lalàna nitondra ny sarin'ilay maherifo an'ny revolisiona amerikana atsimo Simon Bolivar sy ny filoha sosialista tara Hugo Chavez.
Araka ny fanambarana nataon'ny Benigno Alarcon, talen'ny ivon-toeran'ny politika sy governemanta ao amin'ny Oniversite katolika Andres Bello ao Venezoela dia tsy mieritreritra izy fa hitohy ela kokoa io fifandraisan'ny fahefana io. Nanampy izy fa ny Maduro dia mifehy ny firenena amin'ny alàlan'ny heriny sy ny fangejana mafy ny andrim-panjakana rehetra izay midika fa afaka mampiasa fameperana COVID-19 amin'ny hetsika izy handrarana izay mety ho fihetsiketsehana manohitra ny fitondrany.
Very hery ny fanentanana an'i Guaido mpanohitra. Na eo aza ny fahamaroan'ny mpanao fihetsiketsehana fanoherana avy amin'ny taona 2019, fifampidinihana tamin'ny fomba fitsapan-kevi-bahoaka nantsoiny tamin'ny volana desambra ho an'ny olona hanameloka ny latsa-bato 6 desambra ary tsy nahomby i Maduro.
Ankehitriny satria ny demokraty Joe Biden dia kasaina hotokanana ho filoham-pirenena amerikana vaovao, hita eo ihany izay hiseho raha ny fanampiana an'i Venezoela avy any Amerika no jerena.
CTO: Ny lova navelan'i Gordon “Butch” Stewart dia hamolavola ny taranaka ho avy
Ho fahatsiarovana an'i Stewart Gordon "Butch", Sandals Resorts